5 tratra, 1 maty voatifitra tamin’ireo mpanao kidnapping : avotra i Arnaud, nafenina tao an-tranona mpitsara | NewsMada
5 tratra, 1 maty voatifitra tamin’ireo mpanao kidnapping : avotra i Arnaud, nafenina tao an-tranona mpitsara
Avotra ihany! Hitan’ny polisy tao an-tranona mpitsara ambony iray ao Toamasina I Arnaud, ilay tovolahy nisy naka an-keriny. Voatifitra ny iray ary voasambotra kosa ny dimy tamin’ireo jiolahy. Tratra nandritra izany koa ireo fitaovam-piadiana mahery vaika…
Hitan’ny mpitsikilon’ny polisin’ny boriborintany faharoa any Tanambao II ny trano nitazonana an’i Arnaud, omaly tokony ho tamin’ny 2 ora tolakandro. Rehefa nanao ny fanamarinana rehetra ny avy amin’ny polisy, nilatsaka tao amin’ny toerana voatondro, ao amin’ny fokontany Andranomadio, parisela 11/41, ny polisy nahitana ny UIR sy ny avy amin’ny kaomisaria foibe Toamasina.
Hita tokoa i Arnaud, tao amin’ilay trano voatondro. Tsy nanaiky lembenana mora fotsiny ireo mpaka an-keriny fa nisy ny fifampitifirana teo amin’ny polisy sy ireo olon-dratsy. Naharitra adiny iray teo ny fifanandrinana teo amin’ny polisy sy ireo jiolahy, ary nilavo lefona ireo tamin’ny farany. Olona iray naratra voatifitra tamin’izany, ary efatra hafa tratra sambo-belona. Voalaza fa vehivavy ny iray amin’ireo. Nahitana basy Kalachnikov efatra, bala 100 ary grenady iray tao amin’ilay trano.
Araka ny fanazavana, irakiraka ireo olona tratra ireo. Ny roa, mpiandry trano; ny iray, mpanome sakafo, ary mpitazana olona any ivelany ny roa. Eo am-pelatanan’ny polisy avokoa ireo azo sambo-belona ary hiatrika fanadihadiana avy hatrany.
Tao amina tranona mpitsara ambaratonga ambony ao Toamasina no tratra ireo jiolahy sy nahitana an’i Arnaud. Tsy mbola nisy aloha ny filazana fa ao ilay mpitsara io no mipetraka hatramin’ny omaly. Nandeha avy hatrany anefa ny resaka teo anivon’ny mpitandro filaminana, omaly, fa noho ity resaka kidnapping sy i Arnaud tazonina amina tranona mpitsara ity no anton’ny fihetsik’ireo mpitsara nampiaka-peo tamin’ny herinandro lasa teo. Nisy mantsy ny fisavana tranona mpitsara maromaro tamin’ny herinandro ka nahatonga azy ireo nampiaka-peo fa tsy tokony hosavaina ny tranon’izy ireo. Nahatezitra ny mpitandro filaminana izany, ka nisy mihitsy ny vava nivoaka fa tsy misy olona ambony lalàna izany. Nipoitra ity ny nafenina, mazava ho azy fa misy ny fanadiovan-tena sy fanazavana mihoa-pampana amin’izao raharaha izao anio. Hisy ny valan-dresaka ataon’ny “procurreur” ao Toamasina anio, hanazavana momba ity raharaha ity. Andrasana ny tohiny…
Yves S. sy Sajo
Une réponse à "5 tratra, 1 maty voatifitra tamin’ireo mpanao kidnapping : avotra i Arnaud, nafenina tao an-tranona mpitsara"
RAZ'L 12/01/2016 à 14:08
Aoka re mba hohamarinina ny vaovao izay vao havoaka sao sanatria mampiely tsaho!!!! TSY ANA-MPITSARA IZANY ILAY TRANO ARY TSY NISY MATY TAO! Ary SAHIA MBA MANAO FANITSIANA raha tena marina tokoa!